About Us - co zonyango Shandong Chen lu. LTD
Shandong Chen lu isixhobo zonyango co., LTD. Ise kwisixeko esihle unxweme iqanda, yinkampani kunye ukutya karhulumente kunye nolawulo neziyobisi imvume okukhethekile ibandakanyeka unyango, intsimi mveliso X-reyi izixhobo zokuzikhusela, uphando izixhobo kunye nophuhliso, imveliso kunye kwentengiso nokuhlanganisa amashishini eliphezulu-zobugcisa. Phakathi kwabo, ilungelo lomenzi kazwelonke (lomenzi zl2014205451262), nto leyo ephuhliswa ngokuzimeleyo, Unganciphisa imvakalelo sothimbo abakhululekileyo zeradiyoloji impahla ekhuselayo esibhedlele.
inkampani yethu iya unamathele "ukunyaniseka sisiseko itrasti, umgangatho umthombo lweshishini" siseko, bazamela ukusinda umgangatho, funani uphuhliso yi isayensi nethekhinoloji, abantu, rhoqo ukuphucula umgangatho imveliso, ukwanelisa iimfuno lomsebenzisi. Iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo ogqibeleleyo emva-yokuthengisa ukufumana abathengi. Siza kunikezela ngesandla kwinginginya ngokubanzi lwabathengi nabathengisi ukwenza i ngcono ngomso. Bamkele bonke abathengi kunye nabathengisi umnxeba okanye uthethwano ileta.